Costa Dorada - Waxa la arko iyo waxa la sameeyo fasaxaaga soo socda | Wararka Safarka
Susana godoy | 08/04/2021 11:03 | Meelaha Dalxiiska loo tago
Ma jeceshahay inaad socod aad u weyn ku dhex marto Costa Dorada? Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee juqraafiga Isbaanishka iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan. Waxay ku taalaa koonfur-galbeed magaalada Barcelona waxayna leedahay xeebo aan dhammaad lahayn iyo waliba goobo lagu nasto oo xitaa xiisaha ka dhiga, haddii ay suurogal tahay.
Laakiin waa runtaa Aaggan ayaa aad uga badan xeebta sidaa darteedna, marinka dhaqanka, oo ay ka buuxaan sheekooyin iyo xitaa halyeeyo, ayaa waliba soo ifbaxaya iyada ku saabsan. Sidaa darteed, ma seegi kartid wax kasta oo aad booqan karto iyo sidoo kale waxaad ku qaban karto fasaxaaga. Waxaad ku wada heli doontaa farahaaga! Diyaar ma u tahay inaad ku raaxeysato?
1 Tarragona, waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga bilaabo Costa Dorada
2 Lug ku socda xeebteeda
3 Dalxiis ama Xero
4 Booqasho jardiinada mawduucyada ee Salou
5 Nolosha Gaudí ee Reus
6 Waxaan la soconnaa Wadada Cistercian!
7 Soco Ebro Delta
Tarragona, waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga bilaabo Costa Dorada
Waxaa jira dhowr meelood oo uu daboolay Costa Dorada, laakiin shaki la'aan, Tarragona ayaa kaalinta koowaad galay. Iyada ayaynu ka dhihi karnaa taas Waxay umuuqataa matxaf hawada furan, mahadsanidiin wax walboo ay leedahay inay na tusto waxa loogu yeero burburka Tarraco. Waxaan qaadi doonnaa dhowr tallaabo waqtiga si aan u ogaanno buundooyinka, munaarado la mid ah kuwa loo yaqaan 'Scipios' iyo xitaa derbigii hore, oo aan dib ugu laabanayn xilliyadii Roomaanka. Dhammaan tani waxay ka kooban tahay mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee qadiimiga ah, oo leh dhagaxyo dhab ah, oo ay tahay in la ogaado. Tan ka sokow, ma seegi kartid booqashadaada Cathedral of Santa Tecla, Mirador del Mediterráneo ama Port.
Lug ku socda xeebteeda
Waxaan ka soo gudubnay safar waqtigii aan ku laaban jirnay oo aan ku ogaanay dhammaan xeebaheeda. Sababtoo ah waa aag ay ciidda ciiddu marwalba joogi doonto, oo lagu daro biyahan dhagaxa ah ee ay aadka u jecel yihiin. La Pineda waa mid ka mid ah xeebaha ugu fiican, in ka badan laba kilomitir oo dheer oo aad ku tababbaran karto fuulitaanka ama quusitaanka. Cala Fonda, oo sidoo kale loo yaqaan Waikiki, waxay ku taal waqooyiga Tarragona waana mid ka mid ah kuwa ugu xasilloon. Halka Playa de Santes Creus, halkaas oo aragtidiisa iyo milicsiga badda, ay kugu riyaaqi doonaan. Maalin la joogida qoyska oo ku hareereysan kaymo geed waa Cap Roig Beach.
Dalxiis ama Xero
Halxiraalaha safarka mararka qaarkood wuxuu ka bilaabmaa hoyga aan raadinay. Sababtoo ah haddii aan ka hadalno xeebaha meeshan ka kooban, meelaha loo dalxiis tago, oo si faahfaahsan u weyn, ayaa noqon doona kuwa halyeeyada ah. Laakiin haddii aad rabto inaad raadiso wax ka dhaqaale badan, wax ku ool ah iyo qoyska oo dhan, waxaad sidoo kale dooran kartaa a Kaamamka Costa Dorada. Sidan oo kale waxaad had iyo jeer ku jirtaa jawi deggan oo dabcan, waad ku raaxeysan kartaa baadiyaha iyo xeebta markii aad dareento sida ay kula socdaan dhammaan adeegyada gacanta ku haya.
Booqasho jardiinada mawduucyada ee Salou
Sababtoo ah marka lagu daro xeebaha iyo dalxiis badan, Salou sidoo kale waxay leedahay PortAventura World theme park. Markaa waxay noqon kartaa mid kale oo ka badan booqashooyinka waajibka ah, gaar ahaan haddii aad raacdo carruurtaada. Sababtoo ah sidan waad ku raaxeysan kartaa dhammaan soojiidashada qoys ahaan iyagana waxay u noqon doontaa dhiirigelin. Dabcan, Salou sidoo kale waxay ku siineysaa meelo gaar ah sida qalcadda Torre Vella, haddii aad rabto inaad ku raaxeysato qaybta ugu dhaqan ee meesha.
Nolosha Gaudí ee Reus
Mana seegi kartid socodka Reus, maxaa yeelay waa gogosha Gaudí iyo wax kasta oo koobaya. Maaddaama dhowr sano uu ku noolaa aaggan maantana waa xusuus weyn oo farshaxan ah, gees walba. Waad ku raaxeysan kartaa waxa gurigiisa ahaa iyo sidoo kale Gaudí Center, oo ah xarun tarjumaad oo ku taal Plaza del Ayuntamiento. Dhexdeeda, waxaad ka heli kartaa walxaha shakhsiga ah ee farshaxanka iyo sidoo kale, waxaa jira qol leh soo-saaris shaqadiisa ah.
Waxaan la soconnaa Wadada Cistercian!
Waa waddo aad ku sameyn kartid lug ama baaskiil haddii aad dareento inaad intaas ka sii badan tahay. Wadadan waxaad ku leedahay saddex joogsi oo qasab ah oo ah saddexda macaddood: Vallbona, Poblet iyo Santes Creus. In ka badan aag kaamil ah si loo ogaado hodantinimada dhismaha, taas oo iska cad, laakiin sidoo kale gaashanka iyo dabcan, farsamada gacanta. Sidaa awgeed, waa mid kale oo ka mid ah xulashooyinkaas markaan booqanno Costa Dorada, sidoo kale waxay ku jiraan socdaalkeenna.
Soco Ebro Delta
Booqashada Delta del Ebro park waa mid ka mid ah qodobbada aasaasiga ah in laga fiirsado. Tan iyo gudaheeda waxaad ka ogaan doontaa noocyo badan oo xayawaan ah. Laakiin sidoo kale, waxay ku siineysaa mid kale oo ka mid ah waaya-aragnimada wacan ee aad ku raaxeysan karto oo aad ku xusuusan karto noloshaada oo dhan: Safar doon oo aad ku dhex marto Ebro Delta. Hagaag, waxaad marin ka heli kartaa afka mid ka mid ah webiyada ugu muhiimsan, adoo ku raaxeysanaya dabeecadda iyo xeebaheeda. Waxaad leedahay marinno qiyaastii saacad ah, illaa ku dhowaad maalin. Waa maxay aaga aad ku bilaabi doontid fasaxaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Socodka Costa Dorada: Waxa la arko iyo waxa la sameeyo